Inkathi holiday lapha futhi yingakho NetEnt uye basampulile ukuthuthukisa imidlalo yabo futhi abanike touch of Christmas. Jabulela Fruit Shop Christmas Edition at Coinfalls Casino Slots Mobile UK, slot ethandwa ingcono nale edition. The samaholidi based slot game has onqobayo lesikhulu endlini yengcebo abadlali, ngakho aphakamise wena bese ulungela ukunqoba ezinye onqobayo amazing nale slot. The slot okuthakazelisayo Fruit shop kushintshiwe kahle ukuba alethe abathile onqobayo amazing abadlali.
Lokhu Slots Mobile UK Umdlalo usuphelile izinga ihluzo netimphawu Gameplay elula, yingakho abadlali zonke izinhlobo kungaba ukudlala lo slot game ethokozisayo. Imibala egqamile nemifanekiso Christmas ukuboniswa on the background esiqinisekayo ukugcina abadlali ukuba nezivakashi futhi wahlanganyela. Zikhona endle, Usakaza nokuningi abadlali ukujabulela nale slot game. Thathaza phambili nambitheka izici okhethekile wale slot Christmas themed.
Mayelana ngunjiniyela Fruit Shop Christmas Edition
Umthuthukisi lokhu ngoKhisimusi kumnandi Slots Mobile UK kuyinto NetEnt futhi bebelokhu baziwa ubuqambi ukuthi baqashe ngamunye ekhasino zabo imidlalo. Basebenza ukudala best futhi yingakho banayo inala abalandeli.
With a usayizi lwemali 0.01-2.00, ijabulisa Fruit Shop Christmas Edition ine 5 reels futhi 15 paylines. Eshukunyiswa samaholidi, kuba an interesting Slots Mobile UK ukuthi ine izimpawu enhle abadlali ukujabulela. Iphinde lwakhiwe ukuze ivumelane kwemizwa komoya iholide futhi ngalokho abadlali bakwazi ukujabulela ubuhle kaKhisimusi ne reels kwalesi slot.
Ukwanda nokuncipha inkinobho ingasetshenziswa ukulungisa ubukhulu ukubheja, kanye lemali ukubheja ngezinga elikhulu inquma inani win, yingakho qiniseka ukuthi silungise ubukhulu ukubheja ngokuhlakanipha. I logo Fruit esitolo endle kule slot game futhi ngalesosizathu esiyongena esikhundleni sika ezinye izimpawu ukuqedela inhlanganisela win kanye osebenzisa free kungenziwa eyakwenza waba ne ezahlukene izithelo izimpawu kule base mdlalo.
Fruit Shop Christmas Edition liyabukeka Slots Mobile UK esiye izakhi izici ezimangalisayo. Izithelo ezehlukene kanye nezimpawu embobeni mdlalo babe onqobayo amazing abadlali ukumbamba nge zonke spin kwesokudla. Ukuqhubeka spin reels yalesi slot game futhi ake izibani of Christmas alethe kuwe ezinye kwi amazing.